गायक भोजराज काफ्ले सोध्छन् - यो रक्सि कसले बनायो ? (भिडियो सहित) | Kendrabindu Nepal Online News
२ आश्विन २०७६, बिहीबार २०:२२
चर्चित लोकगायक भोजराज काफ्ले लोकगितको क्षेत्रमा परिचित नाम हो । समाजमा हुने गरेका विविध खाले विकृति र विसंगतिलाई जस्ताको तस्तै बनाएर गित गाउन खप्पिस उनले पछिल्लो पटक यस्तै खाले लोकगित सार्वजनिक गरेका छन् ।
रक्सि कसले बनायो बोलको प्रस्तुत गितमा गायक काफ्ले र सन्तोष तामाङको स्वर रहेको छ । दशैंतिहारलाई लक्षित गरि बजारमा आएको गितलाई फूलबारी म्युजिकले निर्माण गरेको हो । जसमा शब्द र लय गायक स्वयंको रहेको छ ।
निर्देशन पनि गायक काफ्लेकै रहेको गित छायांकन रेशम दर्लामीले गरेका हुन् । दिनेश काफ्लेको सम्पादन रहेको गितमा बबिता पोखरेल, निश्चल मगर, मेलिना ठकुरी र जुना तामाङको अभिनय देख्न सकिन्छ । रक्सि खानका लागि हरेकले बनाउने गरेका बाहानालाई व्यंग्य गर्दै काफ्लेले यसमा रक्सिले फाइदा नगर्ने सन्देश दिन खोजेका छन् । हेरौं भिडियोमा :
गायक भोजराज काफ्ले सोध्छन्, यो रक्सि कसले बनायो ? (भिडियो सहित)
Prevभारतीय यौनकर्मीका लागि चर्चित बन्दै पशुपति क्षेत्र, दर्शनार्थी नै ग्राहक
“झण्डा मिलाउनुपर्छ”- ज्योतिष हरिहर (भिडियो सहित)Next